योगेशको पेटबाट किलाहरु निकालियो ! « Khasokhas
योगेशको पेटबाट किलाहरु निकालियो !
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको मध्य प्रदेशमा एक आश्चर्य जनक घटना सार्वजनिक भएको छ । मध्ये प्रदेशको छतरपुरका एक स्थानीयको पेटबाट विभिन्न प्रकार चिजहरु निकालिएको छ, जसले केवल अपरेशनमा खटिएका डाक्टरहरु मात्रै होइनन्, दुनियाका सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ ।
डाक्टर एमपीएन खरेले भने, ‘अपरेशन गर्न निकै मुश्किल थियो, तर अफल भयो । योगेशको पेटबाट सबै ती चिजहरु निकालियो । एक–दुई दिन पश्चात उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिनेछ । एजेन्सी
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख १६ हजार नाघिसकेको छ । मृतकको संख्या ४ हजार